Ebe nchekwa ịnya igwe na ahụike - BikeHike
Category: Ịnya igwe na ahụike
Azịza ngwa ngwa: Gịnị kpatara onye ịnya igwe ga-eji jide ọkụ
Ihe na November 25, 2021 By pịa
Mgbapụta gas Otu n'ime isi ihe mere ndị na-akpụ akpụ ji agba ọkụ bụ n'ihi tankị gas na-agbapụta. Igwe ihe ruru unyi ga-eme ka ịnya igwe gị na-agbasi ike karịa ka ị na-agbapụta
Azịza ngwa ngwa: Ihe kpatara ị ga-eji na-eyi okpu agha mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè
Okpu agha na-arụ ọrụ nke ọma n'ibelata mmerụ ahụ nke isi - Iyi okpu agha na-enyere aka ibelata mmetụta ihe mberede na isi gị. Mgbe ị na-agba ụkwụ ụkwụ abụọ gị, o yikarịrị ka ọ ga-abụ
Onye na-eji ahịhịa ahịhịa ga-adaba n'ụgbọala m
Ọ ga-adaba n'àkwà ịnya ụgbọ ala? Ịkwanye moa na-agba n'àkwà nke gwongworo pikọp nwere ike ime ngwa ngwa mgbe ị na-eji rampụ na-ebu ihe. Nke
Azịza ọsọ ọsọ: Ịnya igwe kwụ otu ebe ọ ga-ere abụba ọkụ
Ịnya igwe kwụ otu ebe bụ ezigbo mgbatị ahụ cardio. Ọ nwere ike inye aka mee ka ahụike obi gị na ngụgụ dịkwuo elu, mee ka oruru ọbara gị dịkwuo mma, wulite ike ahụ ike, ma belata ọkwa nrụgide gị. N'elu
Ajụjụ: Ịnya Ịnya Ọ̀ Ga-enyere Aka Ịkwụsị Ibu
Nnyocha nke British Horse Society mere na 2011 gosiri na ịnya ụgbọ elu nwere ike itinye ume zuru oke ka a na-ekewa dị ka mgbatị ahụ na-adịghị mma. Oge nnọkọ ma ọ bụ otu elekere otu awa
Azịza ngwa ngwa: Ịnya igwe kwụ otu ebe ga-ebelata abụba afọ
Ee, ịgba ígwè nwere ike inye aka idalata abụba afọ, mana ọ ga-ewe oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosiri na ịnya igwe mgbe niile nwere ike ime ka mfu abụba zuru oke ma kwalite ibu dị mma. Iji belata
Ịnya igwe kwụ otu ebe na-ewu akwara ụkwụ
Ịnya igwe kwụ otu ebe nwere ike inye aka wulite ike n'ụkwụ gị na ahụ dị ala, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eji nguzogide dị elu. Omume pedaling nwere ike inye aka mee ka ụmụ ehi gị sie ike, eriri afọ,
Azịza ọsọ ọsọ: Ịnya igwe kwụ otu ebe ga-ewepụ Cellulite
Ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ anụ ahụ ma ọ bụ buru ibu, yabụ ee, ịgba ígwè ga-enyere aka belata cellulite. Ịgba ígwè n'okporo ụzọ na ịgba ịnyịnya ígwè na-ejikọta cardio na ọzụzụ nguzogide. Ịkụ azụ, karịsịa n'elu ugwu, na-arụ ọrụ gị nke ukwuu
Ịnya igwe m ga-enyere m aka ịkwụsị ibu
A ga-enwe mkpuchi mkpuchi uhie 2
Kedu onye Valerie na-ejedebe na Red Riding Hood? Ruo ugbu a. Otu ụbọchị, a chọpụtara na anụ ọhịa wolf gburu nwanne Valerie n'akụkụ mpụta obodo ahụ
1 2 ... 10,596 Osote